Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jabuuti oo kulmaya – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jabuuti oo kulmaya
Febraayo 20, 2019 6:27 b 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay gaaray dalka Jabuuti soona geba-gabeeyay booqashadii uu ku tegay dalka Burundi ayaa la filayaa in Maanta oo Arbaco ah uu la kulmo dhigiisa dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Arrimaha diiradda lagu saarayo kulanka labada Madaxweyne ayaa waxaa kamid ah xoojinta xiriirka walaaltinimo, xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika iyo iskaashiga amni ee labada dal.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu safarkiisa kusoo geba-gabeen doonaa Magalada Adis Ababa ee Caasimadda Itoobiya,halkaas oo lagu wado inay ku kulmaan Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Kulamada uu Madaxweyne Farmaajo la qaadanayo Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Soomaaliland ayaa ah kuwo la wada sugayo,waxaana xiisa gooni ah leh kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi,kaas oo bilaaw u noqon doona wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Wasiirka waxbarashada XFS oo Koonfur Africa kula kulmay wasiirada waxbarashada sare iyo tababarada dalkaasi
Madaxweyne farmaajo iyo muuse bixi oo kulmaya
on Caawa & Daljir iyo Khadar Cawl Ismaaciil, Daljir Garoowe (dhegayso)Fadlan Radio Daljir. waxaad iska hagaajisaan webkiina iyo tuwiterka wararkiina aad soo dhigaysaan. warka aad...